अकर्मण्यताको अन्तर्वस्तु | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण अकर्मण्यताको अन्तर्वस्तु
on: ६ भाद्र २०७५, बुधबार ०६:३१ लेख | दृष्टिकोण
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘अनुगमनको पनि अनुगमन’ गर्ने योजना सार्वजनिक गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले यस्तो अनुगमनका लागि नतीजा म्याट्रिक्स बनाउन लागिपरेको छ । कार्यालयले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनस्तर सुधार्ने ‘जादूको छडी’ जस्तो गरी प्रचार गरेको छ । अनुगमनको पनि अनुगमन नभएकैले विगतमा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको हो त ? विगतमा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी पार्न कुनै ध्यान नै दिइएको थिएन त ?
योजनाको अवधारणा शुरू भएको विसं २०१३ देखि नै आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी पार्न विभिन्न व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा त सरकारले रकम निकासामा ढिलाइ नहोस् भन्न जेठमै संसद्मा बजेट पेश गर्ने, तहगत व्यवस्थाअन्तर्गत निकासा हुँदा कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न समय लाग्ने भन्दै खर्चको विन्दुमा नै रकम निकासा हुने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रममा रकमको अभाव नहोस् भनेर सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव, पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको छ । यस वर्षदेखि आयोजनाका लागि ३ वर्षको खर्चको पहिले नै अनुमान गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई बाध्यात्मक बनाइएको छ ।
यी प्रक्रिया सरलीकरणका अतिरिक्त आयोजना कार्यान्वयनमा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहमा समस्या समाधान समितिको व्यवस्था छ । सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुन नदिन हेलो सरकार र गुनासो सुन्ने एकाइ सबै सार्वजनिक निकायमा स्थापित छन् । अहिलेका केही मन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र पुराना कामलाई समयभन्दा अगाडि नै सक्ने उद्घोष गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’मार्फत गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । ससद्का समितिहरू पनि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन विगतमा जस्तै सक्रिय पारिँदै छन् ।
विकास निर्माणको कामलाई गति दिन यस प्रकार पहिले गरिएका र हाल गरिएका व्यवस्था सफल हुन सक्छन् त ? पछिल्लोपटकको आविष्कार ‘अनुगमनको अनुगमन’को प्रभाव त पछिल्ला वर्षमा थाहा होला । तर, यसअगाडिका सबै व्यवस्था त्यस बेला उपस्थित समस्या समाधान गर्न र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी पार्ने उद्देश्यले नै ल्याइएको थियो । दीर्घकालीन र वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति हेर्‍यो भने यी कुनै पनि उपाय प्रभावी नभएको स्पष्ट देखिन्छ । हुन त यी व्यवस्था नभएको भए यति पनि हुन्थेन भन्न पनि सकिएला । तर, यो खाली अकर्मण्यता छोप्ने राम्रो कवचसिवाय केही होइन । आयोजना नियमित समीक्षा गर्दा कहिल्यै लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । सबैमा प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनबीच ठूलो खाडल रहने गरेको छ । अरूको त के कुरा, देशले नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी तामझामसहित सञ्चालित योजनाको प्रगति पनि निराशाजनक छ । गतवर्षको पहिलो ८ महीनामा २१ मध्ये १८ (८६ प्रतिशत) ओटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम थियो । यस्तै पहिलो प्राथमिकताका ३ सय ४६ मध्ये २०९ (६० प्रतिशत) ओटा आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो । प्रगति हुन नसकेको कारण खोज्दा जुनसुकै वर्ष पनि जग्गा वा वन क्षेत्र प्राप्ति र लगत इष्टिमेटमा ढिलाइ, ठेक्कापट्टामा ढिलासुस्ती, बन्दहडताल, कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा, वैदेशिक सहायता निकासामा ढिलाइ, रकम अभावजस्ता तर्क सदावहार रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ ।
अनुगमन गर्ने भनेको कार्यान्वयनस्तरमा देखा परेका समस्या समाधान गरी विलम्ब वा अवरोध आउन नदिनु हो । त्यसो भएर अनुगमन कार्यान्वयनको चरणमा निरन्तर गरिन्छ । हालको ‘अनुगमनको अनुगमन’ गर्ने व्यवस्थाले पहिला राम्ररी अनुगमन भएको थिएन, त्यसो भएर अब प्रधानमन्त्रीस्तरमा हस्तक्षेप गरेर प्रभावकारी पार्न खोजिएको भान परिएको छ । तर, वास्तविकताले भने अर्कै चित्र देखाउँछ । हाम्रा आयोजनामा अनुगमन नै नभएर प्रगति नभएको होइन । आयोजनाको निरन्तर अनुगमनका लागि फिल्डस्तर, विभागस्तर हुँदै मन्त्रालयस्तरसम्म अनुगमन र मूल्याङ्कनका संयन्त्रहरू छन् । योजना आयोगको मुख्य काम नै अनुगमन गरेर कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने हो । अनुगमन प्रयोजनका लागि वर्षेनि करोडौं रकम खर्च पनि भइरहेको छ । जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुगमन प्रतिवदेन सबै निकायका दराजमा चाङका चाङ छन् । अचम्म, प्रगति नभएको कारण सधंै एउटै छ । लाग्छ, प्रगति नभएको कारण सबैसँग पहिले नै तयार गरेर राखिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष अपेक्षित प्रगति नहुने र कारणका रूपमा दोहोर्‍याइने विवरणले समस्या अनुगमन प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको सङ्केत गर्छ । अनौठो त राजाको तीसवर्षे अधिनायकवादी, पच्चीसवर्षे बहुदलीय प्रजातान्त्रिक र १ दशकको लोकतान्त्रिक सबै व्यवस्था एकै किसिमको अवस्था देखिएकाले यो शासकीय व्यवस्था निरपेक्ष रहेको देखाउँछ । शासकीय व्यवस्था निरपेक्ष रहनु भनेको शासकीय व्यवस्थामा नै समस्या रहनु हो, न कि अनुगमनजस्तो प्राविधिक विषयमा । यो अन्तर्निहित समस्याको समाधान खोजिएन भने आगामी दिनको प्रगति पहिला जस्तो थियो उस्तै रहिरहने निश्चित छ । अकर्मण्यता छोप्न यो वर्ष ‘अनुगमनको अनुगमन’ भनेजस्तै अर्को वर्ष अर्कै औजारको आविष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक कार्यकारीको दायित्व हो, सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको निर्देशन र निगरानी । सार्वजनिक प्रशासन नीति कार्यान्वयन गर्ने औजार हो । सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्न सकेन भने पनि त्यसको दायित्व राजनीतिक कार्यकारीले लिनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरू बोल्छन् मात्र, वास्तविक अर्थमा सार्वजनिक सेवासुविधा पुर्‍याउने काम सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ । फेरि, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना समर्थकप्रति जहिल्यै पूर्वाग्रही हुने भएकाले कहिल्यै निष्पक्ष हुन सक्दैनन् । त्यसकारण, सार्वजनिक सेवासुविधामा समानता, निष्पक्षता र सार्वजनिकपन कायम राख्न सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्था सबै राजनीतिक व्यवस्थाले अँगालेका हुन् । यद्यपि, यसको आविष्कार भने अधिनायकवादी व्यवस्थाले गरेको थियो । सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच केही अउल्लङ्घनीय मान्यताहरूप्रति राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक प्रशासन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले नीति कार्यान्वयनमा स्वायत्तता दिनुपर्छ । नीतिबाट प्राप्त नतीजाबाहेक अरू चिजका लागि कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनु हुँदैन । र अवैयक्तिक योग्यता प्रणालीलाई कहिल्यै खलबल्याउनु हुँदैन । आयोजनास्तरमा देखिएको समस्या यही अन्तर्निहित विषयसँग सम्बन्धित छ ।
कार्यान्वयन ठीक नहुनु भनेको सार्वजनिक प्रशासनले ठीक ढङ्गले काम नगर्नु हो, नतीजाप्रति सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायी नहुनु हो वा उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्था आउनु हो । नतीजाप्रति उत्तरदायी नभएपछि प्रगति प्राप्त हुने कुरै भएन, नतीजा दिनुपर्छ भनेर ऊ लाग्दै लाग्दैन । हाम्रो अहिलेको अवस्था यही हो । हामी काम भएन भनेर चिन्ता त गर्छौं, तर काम नगर्नेलाई केही गर्न सक्दैनौं । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने त कता हो कता । सडकका खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्री नै निर्देशन दिन उद्यत हुन्छन् तर पुरिएन भने चुप लागेर बस्छन् । आफूलाई सहयोग गर्ने ठेकेदार छ, आफ्नो सम्बन्धको कर्मचारी छ, कसलाई कारबाही गर्ने ? लाग्छ, उनको यो भनाइ काम गराउनुभन्दा पनि लोक रिझ्याइँका लागि मात्र हो । कामका लागि कसैलाई उत्तरदायी बनाएर काम फत्ते गर्ने नै होइन ।
यस्तो अकर्मण्यताको एउटै कारण हुन्छ, सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक कार्यकारीको हस्तक्षेप । यद्यपि, कार्यकारीलाई वैधानिक रूपमा नै प्रशासनलाई प्रभावित गर्ने अधिकार भने प्राप्त हुन्छ । प्रभावित गर्ने भनेको नचाहिने कामका लागि होइन, दक्षता र प्रभावकारिताका लागि हस्तक्षेप गर्ने हो । राजनीतिज्ञले सार्वजनिक प्रशासनलाई योग्यताभन्दा सम्बन्धका आधारमा चलाउन खोज्ने, कार्यान्वयनमा स्वयत्तता नदिई आफ्नो इच्छाअनुसार समानता, निष्पक्षता र सार्वजनिकपन भत्किने गरी प्रभावित गर्ने र ट्रेड युनयिनमार्फत कर्मचारी–कर्मचारीबीच विभेद गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप हुन जान्छ । जब प्रशासनमा यस किसिमको हस्तक्षेप गरिन्छ तब राजनीतिज्ञले सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने शक्ति गुमाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनको सबै अकर्मण्यताको उत्तरदायित्व उसले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले पनि योग्यता क्षमता देखाएरभन्दा सम्बन्ध राम्रो बनाएर राजनीतिज्ञको आशीर्वाद लिएर वृत्तिविकासमा अग्रसर हुन्छन् । यसरी एकथरीले उत्तरदायी बनाउन नसक्ने र अर्कोथरीलाई उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्था विद्यमान हुन जान्छ । यो अवस्था विद्यमान हुँदासम्म सार्वजनिक प्रशासनले नतीजा दिन सक्दैन । अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको अवाञ्छित हस्तक्षेप रोकेर सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने हो ।